अस्पतालबाटै बाहिरियो सियोना श्रेष्ठको दुनिया रुवाउने भिडियो (भिडियो हेर्नुस्) | Public 24Khabar
Home News अस्पतालबाटै बाहिरियो सियोना श्रेष्ठको दुनिया रुवाउने भिडियो (भिडियो हेर्नुस्)
अस्पतालबाटै बाहिरियो सियोना श्रेष्ठको दुनिया रुवाउने भिडियो (भिडियो हेर्नुस्)
जिनकै कारण हुने यो समस्याको उपचार शिशु एक वर्ष नपुग्दै सुरु गर्नुपर्ने सुझाव चिकित्सकले दिएका छन्। उपचारका लागि शिशुको जिन नै परिवर्तन गर्नुपर्नै हुन्छ। त्यसका लागि लामो समय लाग्ने र खर्च बढी हुने भएपछि नर्स र चिकित्सकको यो दम्पत्तिले उपचार खर्च जुटाइदिन अपील गरेका हुन्। ***यो समाचारको पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
जमाना यति छिटो परिवर्तन भयो कि मान्छे हरुले जे पनि अनलाइनमै काम गर्न लागे ! अनलाइन बाट श्रीमती पाउँछन, अनलाइन बाटै नोकरी पाउछन भने पढाइ पनि अनलाइन मै हुन् थालेको धेरै भएको छैन ! इन्टरनेटको दुनियामा खरिद विक्रीको प्रख्यात वेब साइट हरु हुन् eBay, OLX र quikr ।
यी वेबसाइटमा तपाई जे पनि बेच्न र किन्न सक्नु हुन्छ । केहि बर्ष देखि, विदेशमा पुराना नोट हरु बिक्रि गर्ने चलन थियो यो आजभोली नेपालमा पनि त्यतिकै मजाले चल्न थालेको छ ! पुराना राणा शासनमा काटिएका नोटको मूल्य लाखौं पर्ने गर्दछ । तपाई संग नेपाली पुरानो नोट छ ? ***यसको पुरा विवरण हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
यसरि बिक्रि गर्नुहोस इन्टरनेटमा । आफुले कति सम्ममा कसैले किन्न आए दिने ? मुल्य खुलाउनु आवस्यक छ । eBay को वेबसाइटमा नक्कली नोट अपलोड गर्न पाइदैन त्यसैले गलत धन्दा गर्छु भने जे पायो त्यहि अपलोड नगर्नु होला ।
eBayको नियम अनुसार नक्कली सामग्री बेच्न पाइदैन त्यसैले सत्य र सहि मात्र बिक्रि गर्नु होला । eBay एउटा माध्यम हो डिल व्यक्तिगत तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ । ebay मा एउटा भारतीय नोटको मूल्य यति कायम गरिएको छ । यदि तपाइलाई नेपाली नोट बिक्रि हुदैनन भन्ने लाग्छ भने eBay को वेबसाइटमै गएर हेर्न सक्नु हुन्छ ।
त्यहाँ ५ डलर देखि १०० डलर सम्मका नेपाली नोट अपलोड गरिएका छन् । उक्त वेबसाइटमा गएर auction बटनमा क्लिक गर्नु भयो भने तपाईको नोटमा कति जना मान्छे ले खरिदको लागि विड गरेका छन् सबै हेर्न मिल्ने छ । ***यसको पुरा विवरण हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
के तपाई संग नेपाली पुराना रूपैया छन् ? छन् भने आजै ebay को खाता बनाएर बिक्रि सुरु गरिहाल्नुहोस् । छैनन् भने यो पोस्ट सेयर गर्नुहोस भएका हरुले थाहा पाई आफ्नो पैसा बेच्न पाउन । ***यसको पुरा विवरण हेर्न यहाँ तल थिच्नुहोस्***
Previous articleजस्तोसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढौ ! नपढे तपाईलाई प’छुतो हुनेछ !
Next articleआज १४ गतेका मुख्य समाचार | जागिर खु ल्यो दिनको १२ सय पाइने,भिटेन प*क्राउ,KTM जान नपाईने